Ngabe kufanele ngisebenzise ibhulashi lesisekelo kuqala noma ibhulashi lokufihla kuqala?
1. Ukunakekelwa kwesikhumba ngaphambi kokwenza izimonyo Ngaphambi kokwenza izimonyo, kufanele wenze umsebenzi wesisekelo wokunakekelwa kwesikhumba ngaphambi kokufaka izimonyo. Ngemuva kokugeza ubuso bakho, izothambisa futhi isimamise isikhumba sobuso. Lokhu kwenzelwa ukuthi isimo sezulu esomile sidale ukulahleka kwe-powder futhi senze izimonyo zibe ntekenteke kakhudlwana. Ngemuva kwalokho faka ukhilimu wokuvimbela ...
Uyazazi izindlela zokuzivikela ekushefeni?
Into yokuqala: khetha ukushefa ekuseni ekuseni kakhulu isikhathi esihle sokushefa. Ngesikhathi sokulala, ngenxa yemetabolism esheshayo, izindlala ezinesibindi zisebenza ngamandla, okwenza izinwele zikhule ngokushesha. Ngemuva kobusuku "obuhlanyayo", ekuseni isikhathi esihle kakhulu "sokunciphisa i-R ...
Ungayisebenzisa kanjani ibhulashi lokufihla ukufihla isici sakho?
Ibhulashi lokufihla kufanele lisetshenziswe ngokuya ngezidingo zangempela zokufihla. Ngakolunye uhlangothi, naka isikhathi sokusetshenziswa, futhi ngakolunye uhlangothi, naka indlela yokusebenzisa. Ekusetshenzisweni okuthile, kufanele kuthathwe izinyathelo ezilandelayo. Isinyathelo 1: ngaphambi kokufaka izimonyo + i-sunscreen ...
Uyazi ukuthi ungagcina kanjani amabhulashi okushefa?
Amadoda amaningi anganaki azokushaya indiva ukugcinwa nokuhlanzwa kwamabhulashi okushefa. Eqinisweni, imikhiqizo enjalo ethinta ngqo isikhumba kufanele inake ukunakekelwa nokuhlanzwa. Ngakho-ke, namhlanje ngizokutshela ngokulondolozwa nokuhlanzwa kwamabhulashi okushefa. Ulwazi oluhlobene, mnumzane ...
Ungayikhetha kanjani ibhulashi le-eyeliner elifanele?
Yenza imigqa ejiyile noma ebukhali edonswe nge-eyeliner ithambe futhi ibe yemvelo. Ibhulashi le-eyeliner lisetshenziselwa ukulungisa okwenziwe ngemuva. Ochwepheshe bezobuchwepheshe abavamile ukupenda wonke u-ezambiwa, ikakhulukazi u-ezambiwa ongezansi. Abanye bamane abapendi futhi basebenzisa kuphela i-eyeshadow. Kwesinye isikhathi gcizelela i-h ...
Ungayikhetha kanjani ibhulashi lesisekelo elifanelana nawe?
I-angled foundation brush Ingxenye eyisicaba yale bhulashi lesisekelo ine-slope encane, futhi ukuma kwe-angled kuzokwenza ukuthi ama-bristles kolunye uhlangothi lwe-brush yesisekelo abe made, okwenza kube lula ukubhekana nemininingwane lapho ufaka izimonyo. Ibhulashi lesisekelo le-angled linezinwele ezithambile, ukuphakama okuphezulu ...
Indlela yokusetshenziswa nokugcinwa kwe-Dongshen lip brush
Ibhulashi lezindebe lingashintsha kalula umthunzi wezindebe, bese lidweba onqenqemeni olubucayi lekhoneni lezindebe. Silisebenzisa kanjani ibhulashi lezindebe? Okulandelayo okuqukethwe kokusebenzisa i-lip brush ehlelwe ngumhleli, ngithemba ukukusiza! Ukusetshenziswa kwe-lip brush Uma usebenzisa i-lipstick, qiniseka ukuqala i-fr ...
1. Kungcono ukhethe isisekelo samanzi. Yize ibhulashi lesisekelo lisetshenziselwa ukuxubha isisekelo, akuyona yonke imidwebo yesisekelo engaxubha isisekelo esihle. Uma ufuna ukugwema amamaki webhulashi lesisekelo, khona-ke kungcono ukhethe isisekelo samanzi. Ngoba isisekelo samanzi si ...
Kungani amadoda esebenzisa amabhulashi okushefa lapho ejabulela isikhathi sokushefa?
Ngesikhathi ngisemncane, ngangilandela abantu abadala beya ezindaweni zokugunda eziqhutshwa nguhulumeni, ngoba ngangingakaqali ngisho nentshebe ngaleso sikhathi, futhi ngangingenayo nencane, ngakho-ke ngisenenkumbulo ejulile wenqubo yokushefa umuntu omdala elele phansi. Izinyathelo zicishe zifane ne-t ...
Ungayikhetha kanjani ibhulashi lokushefa elikufanelayo?
Kunamakhulu ezinhlobo zamabhulashi emakethe, eshibhe kunawo wonke angama-30, kanti amanani entengo asukela ezinkulungwaneni ezimbili kuya kwezintathu noma ngaphezulu. Kuyafana nebhulashi, uyini umehluko? Ngabe kudingekile ukuchitha izinkulungwane zamadola kubhulashi ngalo mzuzu omfushane oyi-1 nsuku zonke? Noma umuntu angathenga ...
Ungayikhetha kanjani ibhulashi lokwakheka?
Yize wonke umuntu enezidingo ezahlukahlukene zokwenza izimonyo zansuku zonke, inqobo nje uma zisetshenziselwa ukusebenzisa amabhulashi okwenza izimonyo, kunezinto ezibalulekile eziyisithupha: ibhulashi lempuphu, ibhulashi lokufihla, ibhulashi elishayayo, ibhulashi lesithunzi, iso lamashiya kanye nebhulashi lomlomo. Ngaphezu kwalokho, udinga ukuba nobuchwepheshe obuthe xaxa. Kuzoba ne-divisio enhle kakhulu ...
Isingeniso nokusetshenziswa kwebhulashi lokwenza iso
Amabhulashi we-Makeup ayithuluzi lokwakha elibalulekile. Izinhlobo ezahlukene zamabhulashi wokwakheka zingahlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zokwenza izimonyo. Uma uhlukanisa amabhulashi okwakheka asetshenziswe ezingxenyeni ezahlukahlukene, ungazibala eziningi zazo. Lapha ikakhulukazi sabelana ngamabhulashi wokwenza iso. Yethula futhi usebenzise, ​​ake siqonde ...
IShijiazhuang Dongmei Brush Co., Ltd. yasungulwa ngo-1986. Iyinkampani yokukhiqiza ibhulashi & yokushefa yokwenza inkampani ngokuhlanganisa ukuthengisa / ukuklama nokukhiqiza.
Yenza amabhulashi, Setha i-Makeup Brushes, Ithuluzi Brushes Ithuluzi, isethi yokwenza ibhulashi, Gunda Izinwele, Ukushefa Setha,